Isaladi yokutya kwaselwandle | Ukupheka kweKhitshi
UCarmen Guillen | | Cuisine yaseSpain, Ukuqala okubandayo, IMarisco, Iiresiphi ezisempilweni, Iiresiphi ezilula, I-Tapas kunye ne-skewers
Kukho isidlo esingenakuphikiswa ngehlobo, kwaye ngaphandle kwamathandabuzo Ukutya kwaselwandle. Ngubani ongakhange asonwabele esi sidlo simnandi kunye nolwandle ngenye ihlobo? Ubuncinci, nokuba sendisekhaya okanye kwinto yesihlobo, ndikwazile ukuyinandipha.
Kulabo abangazi kakuhle ukuba zeziphi izithako ezenziwe ngalo iresiphi yaselunxwemeni, nolu uluhlu. Ngaba uya kuyilungisa?
I-salpicón etyebileyo yokutya kwaselwandle enokunikwa isitya esinye okanye itapa ebandayo kunye nokuqalisa kubusuku obushushu behlobo. Ingaba ucinga ntoni?
1½ itswele elitsha
Izinti ezili-12 zokutya okulwandle
Iigram ezingama-500 zeeprawn eziphekiweyo
Iigram ezingama-500 ze-octopus
Siza kukhetha isitya esikhulu esongeza kuso zonke izithako nganye nganye. Sibala ukuba ngaphambili besikhe sapheka zombini Imifula njenge i-octopus (ibiliswe emanzini ngetyuwa encinci).
Sihlamba zonke izithako kunye nemfihlo ukuze sifumane ukuqaqamba okuhle usike konke kuncinci kakhulu. Nokuba ungadibanisa njani isithako esinye okanye enye, zonke ziya kuxhomekeka kwinkqubo efanayo: uhlambe, uxobule kwaye usike zibe ngamaqhekeza amancinci kakhulu.
Inyathelo lokugqibela liya kuba ixesha lethu lesalpicón ngeoli yeoli, ityuwa kunye newayini iviniga ukungcamla.
Ukuba uyayithanda i- yekoriyandireUnokongeza kancinci kuyo kwaye iya kuyinika incasa eyahlukileyo.
Kuxhomekeka ekubeni uyayithanda ngaphezulu okanye incinci, ungongeza cilantro okanye ipaprika eshushu xa uyinonga. Kwimeko yethu, siyinonge ityuwa, iviniga kunye neoyile ye-olive.
Umendo opheleleyo kwinqaku: yokuqalisa » Iiresiphi zehlabathi » Cuisine yaseSpain » Ukutya kwaselwandle
Iichickpeas zisiwe ngamakhowa kunye nekhari